चुनावी खर्च र स्रोत | eAdarsha.com
चुनावी खर्च र स्रोत
१. प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरेपछि चुनावको वातावरण तातिंदै गएको छ। जति चुनावको वातावरण तातिंदै गएको छ, उति उम्मेदवार र पार्टीरुलाई साधन स्रोतको अभाव खट्कँदै गएको छ। तिनीहरु कहाँबाट कसरी साधन स्रोत जुटाउन हो त्यसमा लागेका देखिन्छन्।
२. चुनाव ज्यादै खर्चालु भएको छ। निर्वाचन आयोगले धेरै कुरामा बन्देज लगाएको छ र, चुनावको लागि खर्चको सीमा पनि तोकेको छ। तर त्यो खर्चको सीमा हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भएको छ। उम्मेदवारहरुले त्यसको दशौं गुणा बढी पैसा खर्च गर्ने गरेका छन्। तर त्यो स्रोत कसरी जुटाइएको हो, त्यसको मूल स्रोतमा प्रवेश गर्नु नै समस्या छ।
३. चुनावको बेला उम्मेदवारहरुलाई धेर-थोर चन्दा आउँछ । साथी भाइहरु र छिमेकीहरुले यस्तो महत्वपूर्ण बेलामा सहयोग गर्नु पर्दछ भनेर आफैले र आँफूले उठाएर दिने गरेका पनि देखिन्छन् । पार्टीका कार्यकर्ताहरुले पनि स्वेच्छाले चन्दा उठाउने गर्दछन्। तर त्यसरी उठाएको चन्दाले के कति सघाउ पुर्‍याउँछ, त्यो भन्न सकिन्न।
४. यस्तो बेलामा केही धनीमानी व्यक्तिहरु, ठेकेदारहरु, भ्रष्ट कर्मचारीहरुले पनि अरुलाई थाहा नदिइकन मोटो रकम सहयोग गर्ने गरेको सुनिन्छ। तर उनीहरुले दिएको त्यो रकम सहयोग नभई लगानी हो। उनीहरुले अहिले अप्ठेरो परेको बेला नेताहरुलाई सहयोग गर्छन्। तर पछि उनीहरुले नेताहरुबाट विभिन्न किसिमले फाइदा उठाउँछन्।
५. यस्तो ठूलो चुनावको बेला देश भित्रकाहरुले मात्र होइनन देश बाहिरका कंपनी र संस्थाहरुले पनि पार्टीर नेताहरुलाई मोटो रकम सहयोग गर्दछन्। तर उनीहरुले पनि निःस्वार्थ सेवा गर्ने होइनन् । उनीहरुले अहिले एक हातले सहयोग गर्दछन्, पछि दोस्रो हातले त्यसको दशौं गुणा बढी रकम असुल उपर गर्दछन्।
६.हाम्रा नेता र दाताहरुको यस्तो लेनदेनको क्रम चलेको अहिले होइन, धेरै पहिले देखिको हो । जति पछि भयो, उति यो प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। जति यो प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, उति माफियाहरु बढ्दै गएका छन्। माफियाहरु पनि विभिन्न किसिमका र विभिन्न विषयका छन्।
७. नेताहरु अर्थात् सरकारमा रहेकाहरुले त्यस्ताहरुसँग गरेको व्यवहारबाट त्यो कुरा र्छल· हुन्छ। माफियाहरुलाई साधारणतया नियम कानून लाग्दैन। उनीहरुले गल्ती गरे पनि त्यो माफ हुन्छ। सरकारले त्यस्ताहरुलाई बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना परियोजना पनि दिने गर्दछन्। हाम्रा नेताहरु दानी छन्। हाम्रा साधन स्रोत उनीहरु नियम कानून मिचेर भए पनि अरुलाई दिन्छन्। यस्तो काममा जनताले सजग र सतर्क भएर हेर्र्नु आवश्यक छ।